Ciidamada Xarakada Shabaabul Mujaahidiin waxey habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen difaacyada ciidamada dowlada Ridada Jabuuti ay ka sameysteen degmada Jalalaqsi oo ka tirsan gobalka Hiiraan.
Dagaalka oo dhacay saqdii dhexe ee xalay waxey ciidamada Shabaabul Mujaahidiin si gaar ah ugu qaadeen saddex fariisin oo ciidamada Jabuuti ay ka sameysteen dhanka Galbeed ee degmadaasi.
Dagaalka waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan’iyadoona dhawaaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay degmooyin iyo deegaano ka kala tirsan gobalada Hiiraan iyo Shabeelada dhexe.
Ciidamada Ridada Jabuuti ayaa saaka aroortii hawada ka saaray isgaarsiinta degmada’iyagoona baaritaano xoogan ka sameeyay xaafadaha dhanka Galbeed ee degmada Jalalaqsi taasi oo muujineysa in khasaara culus ciidamada Jabuuti lagu gaarsiiyay dagaalka ka dhacay degmadaasi.
Previous: Isbedel Ku Yimid Qaab Maamuleedka Khariiradda Dalka Soomaaliya (Map Cusub).
Next: Diyaarado Meydad Iyo Dhaawacyo Ka Qaaday Degmada Jalalaqsi.
1 thought on “Ciidamada Jabuuti Oo Lagu Weeraray Gobalka Hiiraan.”
Asc ciidamada riddada Jabuuti waa in si dhakhso ah loo soo afjaraa isma difaaci karaan waqti dheer.Cadawgeena koowaad waa Xabashi injirleey hala iskukaashado oo kufaarta Xabashida weerarada halagu badaiyo oo sideey ugu dhabarjabeen Ceelbuur ayaa ku sugaysa wilaayaadka isÃ±aamiga ah ee Soomaaliya Allahu Akbat